Dagaalyahan Al-Shabaab ‘ka tirsan oo qarax is-miidaamin ah ku dilay labadiisa waalid’ | Caroog News
December 8, 2021 - Written by caroog
gabadha, wuxuuna kadib ka cararay magaalada ayada oo aan dib loo arkay kahor qaraxii xalay.
Is-miidaamiyaha ayaa la sheegay inuu shan sano kahor ka tagay magaalo xeebeedka Mombasa kuna biiray kooxda Al-Shabaab.
Karanja Muiruri oo ah madaxa booliska Nyanza ayaa sheegay inay falkii xalay ula macaamilayaan inuu ahaa mid argagixiso.
“Waxaan isku dayeynaa inaan ogaano halka uu jiray bilihii tegay. Tani waa arrin halis ah, waana ku raad joognaa,” ayuu yiri Karanja Muiruri.